इन्टरिंगिंग कवरेजहरू, फोर्टिभ ग्लान्सहरू, प्लेबिल लुगा लगाउने - सेक्सी वाडविले हाम्रो स्वागत गर्छ Showgirls! रिले माथि माथि फटाउन हाम्रो आकर्षक सुन्दरताहरू जस्तै फर्टोन मुस्कुराउँछ।5रिल्स र 25 भुक्तान लाइनहरूको साथ तपाईंले स्पार्कलिंग मुनाफाको साथ सांसद प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ; नि: शुल्क खेलहरूमा तपाईले हाम्रो रहस्यमय नर्तकहरु को लाल गुलाब संग एहसास गर्नुहुन्छ!
तपाईंको लक्ष्य एक payline संग5एक समान प्रतीकहरु को जमीन मा छ। एक नियमित खेलमा एक विजेता ढाँचामा प्रतीकहरू बायाँ तिर सुरु हुनेछ र दायाँतिर जारी रहनेछ। जित्नका लागि, प्रतीकहरू एकअर्काको बिरुद्ध अन्य प्रतीकहरू बिना एकअर्कालाई झूट झनै पर्छ। बिल्डरले बाहेक सबै प्रतीकहरूको लागि WILD लाई प्रतिस्थापन गर्दछ। कुनैपनि स्थितिमा3स्क्याटर प्रतीकहरू हुँदा, गर्भ गोन जंगली सुविधासँग 15 निःशुल्क स्पिनहरू पुरस्कार दिन्छन्।
Showgirls ™ प्रविष्ट गर्न दाँया पछि तपाईंले खेलमा शर्त गर्न चाहानु भएको रकम चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि निर्णय गर्नुहोस् कि तपाइँ प्रत्येक रेखामा शर्त कसरी चाहनुहुन्छ र साथमा तपाइँसँग प्ले गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं प्रतीक प्रयोग गरेर सही रकम सेट गर्न सक्नुहुन्छ "+ / -"। "सुरुवात" बटनले व्यक्तिगत राउन्ड सुरू गर्दछ जब "स्वत: प्ले" बटन स्वचालित रूपमा राउन्ड सुरु गर्दछ। "रोक्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नाले स्वचालित प्रकार्य अन्त्य गर्नेछ।
"Paytable" बटनले खजानाको अवलोकन खोल्छ। तपाईंको सम्भावित खजानाहरू स्वचालित रूपमा गणना भएको रकमको आधारमा गणना गरिन्छ।
डबल वा केही पनि छैन: "ग्याम्बल" बटन भर्खरै विजेता संयोजन भएको छ (पेन्टेबल हेर्नुहोस्)। "Gamble गेम" मा तपाइँ आफ्नो winnings डबल गर्न सक्नुहुन्छ। जित्ने संभावना 50: 50 हो। यदि तपाईं जुवा गर्न चाहनुहुन्छ भने, केवल 'Gamble' बटन थिच्नुहोस् र 'Gamble खेल' सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईं जुवा गर्न चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि "सङ्कलन" मा क्लिक गर्नुहोस्।
गर्भवती महिलाहरु संग नि: शुल्क खेल भयो
कुनैपनि स्थितिमा3स्क्याटर प्रतीकहरू हुँदा, गर्भ गोन जंगली सुविधासँग 15 निःशुल्क स्पिनहरू पुरस्कार दिन्छन्। नि: शुल्क गेमहरूले तपाईंको दाबीलाई अन्तिम नियमित खेलबाट प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईंले पाँचौं रीलमा रातो रगत खानुहुन्छ भने, यसले रिल्स भन्दा माथि4शोलकहरू मध्ये एक लाई बढाउँछ। प्रत्येक Showgirl तपाईले पहिले नै3रातो गुलाब दिनुभएको छ, तपाईंको विजेता संयोजनहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नको लागि रिल्स 2,3र4मा जंगली प्रतीकको रूपमा कार्य गर्नेछ।
Showgirls अपडेट गरिएको: जनवरी 24, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.1 मकई राइडर 2
2.0.0.2 पिज्जा पुरस्कार
2.0.0.3 लकी 3
2.0.0.4 ब्ल्याक ज्याक मल्टीहन्ड
2.0.0.7 Paco र popping मिर्च
2.0.0.8 ब्रह्मांडिक भाग्य